Masuuliyiinta Turkeyga iyo Ruushka oo kulan muhiim ah yeelanaya – The Voice of Northeastern Kenya
Masuuliyiinta Turkeyga iyo Ruushka oo kulan muhiim ah yeelanaya
Madaxweynaha dalka Turkeyga Racep Tayid Erdogan ayaa maanta u ambabaxay wadanka Ruushka, isagoo lagu wado in uu la yeesho dhigiisa Ruushka Vladamir Putin.
Kulanka labada hogaamiye ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ay isku hor fariistaan, tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay Milatariga Turkeyg-ga soo rideen diyaarad dagaal oo uu Ruushka leeyahay.
Erdogan iyo Putin ayaa laga dhowrayaa in ay ka wada hadlaan sidii dib loogu xoojin lahaa cilaaqaadka diplomaasiyadeed ee labadooda xukuumadood, si loo so oaf jaro cawaaqibka ka dhashay hadalladii qallafsanaa ee ay warbaahinta isku mariyeen madaxweyneyaashaan.
Booqashada uu maanta madaxweynaha Turkeyga ku tagayo magaalada uu kasoo jeedo Vladamir Putin ayaa sidoo kale ah safarkii ugu horeeyay ee uu dibadda ku aaday tan iyo markii uu batamihii bishii lasoo dhaafay afgambiga Milatari ee dhicisoobay ka dhacay Turkey-ga.
Wada hadalka la filayo in uu dhex maro madaxweyneyaasha Ruushka iyo Turkeyga ayaa la rajeynayaa in wax looga baddalo go’aannadii ay xukuumadda Moscow cunaqabateynta dhaqaale ugu soo rogtay Turkeyga, kadib markii diyaaradda Ruushka oo howlgal duqeyn ah ka waday gudaha Syria ay milatariga Ankara soo rideen bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay.
Bishii June ee sanadkaan ayey ahayd markii uu Putin aqbalay raali galin uu Erdogan ka bixiyay tallaabadii lagu toogtay diyaaraddaas, waxaana madaxweynaha Turkeyga uu falkaas ku tilmaamay mid laga qoomameeyay.
← Dawladdaha Japan iyo Shiinaha oo is dhaafsaday hadalo kulul
Dalxiise ajnabi ah oo lagu dilay Masaai Mara →